मधुमेह आज एउटा आम स्वास्थ्य समस्या भएको छ । हिजो सम्म उच्च वर्गमा मात्र सिमित जस्तै रहेको यो रोग आज आएर मध्यम वर्गिय समाजको पनि टाउको दुःखाइ बन्दै गएको छ । बदलिंदो जीवनशैली व्यायाम बिनाको शहरीया जीवन
स्क्रब टाइफस एक संक्रात्मक रोग हो । ट्रोम्बिक्युलिड माइट जातको किर्नामा रिकेटसिया जातको ओरिएनसिया सुसुगमुसी नामक किटाणु हुर्किन्छ । त्यो किर्नाले मानिसलाई टोक्दा संक्रमण हुने गर्छ । यस रोगको बारेमा सन् १८९९ मा पहिलो पटक जापानमा
डा. कृष्ण काजी भोमी काठमाडौंको जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा वरिष्ठ युरोलोजिष्ट एवं एसोसियट प्रोफेसर हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा एक दशकको अभ्यासमा डा. भोमीले करिब १ लाख जति व्यक्तिलाई युरोलोजीसम्बन्धि सेवा दिइसक्नुभएको छ । नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण
भटमास यसमा उच्च फाइवर र उच्च प्रोटिन हुन्छ । यसले तपाइको शरीरको कोशिकाको रक्षा गर्दछ । यसले क्यान्सर कोशिका द्धारा गरेको हमलामा स्वस्थ कोशिकाको रक्षा गर्दछ । यसका साथै बिस्तारै हुँदै गरेको ट्यूमरको
चितवन जिल्ला औलोबाट सुरक्षित बन्दै गएपनि आयातित बिरामीका कारण जोखिम कायमै रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ । विश्व औलो दिवसका अवसरमा ‘हाम्रो सक्रियता, औलो निवारणमा सफलता’ भन्ने मूल नाराका साथ आज चितवनमा भएको पत्रकार